imfihlo, ubuqotho kanye nokutholakala
none Ukuphepha Ukugcinwa kwemfihlo, ubuqotho nokutholakala
Ukugcinwa kwemfihlo, ubuqotho nokutholakala
Ukugcina imfihlo, ubuqotho, nokutholakala, okuvame ukubizwa ngokuthi yi-CIA triad, kuyizakhi zokwakha ukuphepha kolwazi. Lokhu okuthunyelwe kuchaza igama ngalinye ngezibonelo.
Noma ikuphi ukuhlaselwa kwesistimu yolwazi kuzofaka engozini eyodwa, ezimbili, noma zontathu lezi zinto. Ngokuya ngokuthi iyiphi yalezi zingxenye ebeka engcupheni kakhulu, izilawuli zokuphepha ezisebenza kahle zingakhiwa ngendlela efanele.
Ngamagama alula, imfihlo isho okuthile okuyimfihlo futhi okungafanele kudalulwe kubantu noma izinhlangano ezingahlosiwe.
Imfihlo iqinisekisa ukuthi imininingwane ebucayi itholakala kuphela kumuntu ogunyaziwe futhi igcinwe kude nalabo abangagunyaziwe ukuba nayo.
Wonke umuntu unemininingwane afisa ukuyigcina iyimfihlo. Ngakho-ke Ukuvikela imininingwane enjalo kuyingxenye ebalulekile yokuphepha kwemininingwane.
Izibonelo zolwazi oluyimfihlo
Izitatimende ze-akhawunti yasebhange
Izinombolo zekhadi lesikweletu
Uma kwenzeka ukuthi okuyimfihlo kuthinteka, kungaholela ekufinyeleleni okungagunyaziwe kolwazi lomuntu siqu noma ukulahlekelwa yimfihlo ngokuphelele!
Izibonelo zokuhlaselwa okuthinta imfihlo
Ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi
Izindlela zokuqinisekisa imfihlo
Amagama wabasebenzisi namaphasiwedi
Ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili
Amathokheni okuphepha noma ama-fobs okhiye
Ngokomongo womhlaba wokuphepha kolwazi (InfoSec), ubuqotho busho ukuthi uma umthumeli ethumela idatha, umamukeli kufanele athole imininingwane efana ncamashi naleyo ethunyelwe umthumeli.
Idatha akumele ishintshwe ekuhambeni. Isibonelo, uma othile ethumela umlayezo 'Sawubona!', Umamukeli kufanele athole 'Sawubona!' Lokho wukuthi, kufanele kube idatha efanayo ncamashi naleyo ethunyelwe umthumeli. Noma ikuphi ukungezwa noma ukukhishwa kwedatha ngesikhathi sokuhamba kungasho ukuthi ubuqotho bonakalisiwe.
Isibonelo sokuhlaselwa okuthinta ubuqotho
Ukuhlaselwa kweMan-in-middle (MITM)
Ukutholakala kusho ukuthi ulwazi luyatholakala kuzinhlangano ezigunyaziwe noma kunini lapho kudingeka khona. Ukungatholakali kwedatha nezinhlelo kungaba nemiphumela emibi.
Kubalulekile ukuba nezinhlelo nezinqubo ezikhona ukuvimbela noma ukunciphisa ukulahleka kwedatha ngenxa yenhlekelele. Uhlelo lokubuyiselwa kwezinhlekelele kumele lubandakanye izehlakalo ezingalindelekile ezifana nezinhlekelele zemvelo nomlilo.
Umsebenzi wokulondoloza ojwayelekile uyelulekwa ukuze uvimbele noma unciphise ukulahleka kwedatha okuphelele kusuka kuzimo ezinjalo.
Futhi, imishini yokuphepha eyengeziwe noma isoftware efana nezicishamlilo nezinsiza zommeleli zingavikela isikhathi sokuphumula nedatha engatholakali ngenxa yezenzo ezinonya njengokuhlaselwa kwe-denial-of-service (DoS) kanye ne-network intrusions.
Isibonelo sokuhlaselwa okuthinta ukutholakala
Ukuhlaselwa kwe-DoS ne-DDoS
Ukuhlaselwa kwezikhukhula ze-SYN
Ukuhlaselwa ngokomzimba kwingqalasizinda yeseva
faka iJava 8 ku-mac
khipha obakaki ohlwini python
isoftware evulekile yokulandela umkhondo wesiphazamisi
Ungayisebenzisa kanjani iBrew ukufaka iJava ku-Mac
Isitatimende sethebula le-SQL Alter
Ishidi Lokukhohlisa Ithuluzi leKarate API
Ungayithumela Kanjani Imininingwane Yefomu Ngesicelo Sokuthunyelwa Esiqinisekiswe NGOKUPHELELE
Amathiphu Wokuhlola Ukusebenza Kwewebhu
Ungawaphatha Kanjani ama-Akhawunti amaningi we-GitHub kuMshini Ofanayo
Ungawadlulisa kanjani amafayela ku-Linux nge-SCP ne-Rsync
Isu Lokuzenzekelayo Lokuhlola Amaphrojekthi we-Agile
I-Python Qhathanisa Uhlu Olubili Lwezichazamazwi
Funda Ifayela Lezakhiwo kuJava Nge-ResourceBundle